किन गर्नु हुँदैन ? एउटै गोत्रमा विवाह — KhabarTweet
किन गर्नु हुँदैन ? एउटै गोत्रमा विवाह
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०९, २०७४ समय: ११:००:००
तपाइँलाई एकै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने चलनबारे तपाइँलाई थाहै होला । तर किन हुन्छ त यस्तो विवाद किन हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह गर्न रु विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप सप्त ऋषिको नामले चिनिन्छन् । यसमा आठौं ऋषि अगस्तिका सन्तान ‘गौत्र’ भनेर चिनिन्छन् ।